Min magangelyo doon ilaa shaqoActuellement sélectionné
​Halkan waxa aad ka arki kartaa sida geeddi-socodku noqonayo laga bilaabo marka aad Iswiidhan ka dalbanayso magangelyada ilaa aad ka helayso shaqo. Dabcan shaqada toos waad u dalban kartaa oo uma baahnid in aad sugto imaatinka wadahalka la qabsi siinta. Dhammaan qaybaha geeddisocodka waxa kaa saaran mas´uuliyad si ay u noqoto sida aad u rabto iyo si ay u noqoto sida ugu fiican ee suurtogalka ah.
Go´aan ka gaaridda magangelyada iyo sharciga degenaanshaha
Qiimayn iyo sahamin-wadahadalka la qabsi-siinta
Waxbarasho iyo tababar shaqo
Af Iswiidhishaka qaxootiga (SFI))
Shaqo ama waxbarasho sii socota
Marka aad ku timaaddo Iswiidhan qaxootinimo, waxad dalbanaysaa magangelyo. Waxa magangelyada laga dalbanayaa Migrationsverket. Muddada aad sugayso jawaabta, waxala degi kartaa qaraabada ama asxaabta aad Iswiidhan ku leedahay. Haddii aanad iskaa u habaysan karin meel aad degto, waxad caawimo ka heli laanta socdaalka (Migrationsverket).
Marka go´aan la gaaro, waxa laguugu yeerayaa Migrationsverket, oo waxa laguu qabanayaa wadahadal meesha lagaaga saarayo. Haddii codsigaagii la diiday, waad ka baxaysaa Iswiidhan. Rafcaan ayad ka qaadan kartaa diidmada. Haddii codsigaagii la aqbalay waxad helaysaa sharciga degenaanshaha Iswiidhan, isla markiibana waxa ka shaqaynaysaa sidii aad ula qabsan lahayd bulshada oo aad u geli lahayd suuqa shaqada.Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aad samayso waa in aad tagto wakaaladda cashuuraha (skatteverket) si aad isu diiwaangeliso oo aad u heso afartaada lambar ee ugu dambeeya lambarkaaga shakhsiga ah. Qiyaastii waxna ma kala soconayaan Iswiidhan lambarka shakhsiga ah la´aantii.
Si aad ugu gasho suuqa shaqada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah waxad booqanaysaa Arbetsförmedlingen, marka aad Iswiidhan timaaddo ee aad heshi sharcigaaga degenaanshaha. Xafiiska shaqadu (Arbetsförmedlingen) wuxu kugu taageeri doonaa waxqabadyo la qabsi-siinta ah oo ku wadaya jidka shaqada. Xafiiska Arbetsförmedlingen waxad kula hadli doontaa gacanhaye kula yeelanaya wadahadal la qabsi-siin ah. Wadahadalkaasi wuxu keenayaa qorshe la qabsi-siineed oo aad ku wada heshiinaysaan. Qorshaha waxa ku qornaanaya waxa aad yeelayso si aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ugu heli karto shaqo waafaqsan aqoontaada. Marka aad tahay qaxooti cusub ama aad sharciga ku heshay qaraabonimada qof magangelyo helay labadii sano ee ugu dambaysay, waxad xaq u leedahay in aad hesho lacagta la qabsashada haddii aad raacdo qorshaha la qabsashada. Lacagta waxa go´aaminanaya xafiiska shaqada laakiin waxa bixinaya Qasnadda caymiska. Marka aad xafiiska shaqada u timaaddo wadahadalka la qabsisiinta, waxa lagaa caawinayaa in aad buuxbuuxiso foomka ay tahay in loo xereeyo Qasnadda caymiska. Ka sii akhri wax ku saabsan la qabsiga bogga internetka ee Arbetsförmedlingen. Waxa kale oo aad ka sii akhrin karta waxa ku saabsan lacagta la qabsiga bogga internetka ee Försäkringskassan.
Qorshaaga la qabsashada waxa ku jiri kara hawlqabadyo si aad u isticmaali karto aqoonta aad leedahay, wixii aad ka soo shaqaysay ama aad hore u soo baratay. Tusaale ahaan waxad tababar shaqo ku qaadan kartaa shaqo-bixiye, adiga oo qabanaya shaqooyinkii aad ku samayn jirtay waddankaagii si aad u barato ereyada Af iswiidhishka ah ee u gaarka ah xirfaddaada. Waxa kale oo aad dhammaystir ku samayn kartaa waxbarashadaadii hore haddii aanay toos u waafaqsanayn waxbarashada Iswiidhan ee u dhiganta. Hawlqabadyadaas waxad ku heshiinaysaan marka la samaynayo qorshaha la qabsashada.
Iswiidha waxay go´aamisay in ay qaxootiga cusubi xaq u leeyihiin in ay bartaan tilmaamaha bulshada , yacnii inay wax dheeraad ah ka bartaan bulshada Iswiidhan,ayagoo qaar kale isla jira. Waxa ugu fiican in ay jiraan koorsooyin afkaaga lagu baranayo, si aad ugala niqaashi karto kuwa kale waxa aad ku qaadataan waxbarashada. Waxad sidoo kale internetka ka heli kartaan, ka qaybgalayaal kala duwan warbixintooda, (deltagarmaterial). Boggakan wuxu kaga jiraa khaanadda Samhälle dhexdiisa. Halkaas waxa kale oo aad ka heli kartaa xiriirada boggaga kale ee tilmaanta bulshada wata.
Af Iswiidhishaka qaxootiga (SFI)
Marka aad timaaddo soo galooti cusub ahaan, waxa muhiim ah in aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah u barato Af Iswiidhishka. Waa furaha si aad dhakhso ugula qabsan karto Iswiidhan. SFI-gu waa waxbarasho aasaasi ah oo luqadda Iswiidhishka ah. Degmada ayaa mas´uul ka ah in uu jiro SFI. Dhigitaanka SFI-gu wuxu noqon karaa mid ku wajahan xirfado kala duwan. Barashadu waxay ku socotaa tallaabooyin kala duwan oo marka aad tallaabo dhammayso waxad u gudbi kartaa tillaabada xigta. Waxa jira afar koorso A, B, C iyo D. Waxa aad bilaabi kartaa SFI-ga sanad dugsiyeedka oo dhan, waxaanad raacaysaa qorshe waxbarasho oo shakhsi ah. Wakaaladda Iskuullada (Skolverket) ayaa mas´uul ka ah qorshaha kooras ee SFI-ga. SFI-ga degmadaada.
Waxa jira habab fara badan oo shaqo lagu raadsado. Mar walba waa fikrad fiican in la haysto waxa lagu magacaabo CV marka qofku codsigiisa dirayo. Halkaas waxad ku qoraysaa waxa aad waxbarasho leedahay iyo wixii aad hore uga soo shaqaysay. Badanaa waxa shaqo lagu helaa xiriirada, dadka aad taqaanno ama dadka ay yaqaanaan saaxiibadaa. Laga yaabee in aanad dad badan xiriir la lahayyn marka aad Iswiidhan ku cusubtahay, markaa waxa kuu fiicnaan kara in aad tababar shaqo samayso oo aad muujiso waxa aad karto. Waxa shaqo laga raadsan karaa bogga internetka ee xafiiska shaqada ee lagu magacaabo platsbank, waxaana qofku u gudbin karaa xiisayntiisa shirkadaha dadka shaqo-geeya qaarkood. Waxa ay ka shaqeeyaan sidii ay u geyn lahaayeen qofka ku habboon. Shaqada ku habboon.
Hawlqabadyada qorsha la qabsashadu waa wakhti buuxa wuxuuna socdaa ugu badnaan 24 bilood. Wixii intaas ka dambeeya, waxa lagu talogalayaa in aad shaqo gasho ama aad waxbarasho sii wadato.